श्रीमानको बीभत्स ह’त्या गरेर श्रीमतीलाई पठाइयो यस्तो अडियो, त्यसपछि…. — Imandarmedia.com
श्रीमानको बीभत्स ह’त्या गरेर श्रीमतीलाई पठाइयो यस्तो अडियो, त्यसपछि….
काठमाडौ। शनिबार दिउँसो जानकी गाउँपालिका-९ की धर्नादेवी दास हतास मनस्थितिमा प्रहरी चौकी अमरावती पुगिन्। फेसबुक म्यासेन्जरमा एक जना व्यक्तिको ह’त्या भएको ‘अडियो’ आएपछि उनी अत्तालिँदै प्रहरी कहाँ पुगेकी थिइन्।
एक जना छिमेकीसँग भएको कुराकानी पाएपछि उनलाई शंका थियो, ‘कतै ह’त्या गरिएका व्यक्ति मेरै श्रीमान् त होइनन् ?’ किनकी, श्रीमान अर्जुन दास पनि शुक्रबार अपरान्हदेखि नै बेपत्ता थिए।
रुँदै श्रीमतीले दिएको अडियो पाएपछि अनुसन्धान गर्ने सुरसार गरिरहँदा प्रहरीले अमरावती सामुदायिक वनमा एक जनाको विभत्स अवस्थामा श’व भेटिएको सूचना पायो।
वनका पालेले जनप्रतिनिधिलाई श’व भेटिएको जानकारी दिएपछि प्रहरीलाई बोलाउन वडाध्यक्षसहितका टोली चौकीमा पुगेका थिए।जनप्रतिनिधिले पनि अडियोमा भनिएजस्तै अवस्थाको शव भेटिएको बताएपछि सामुदायिक वनमा गएर हेर्‍यौं,
श’व त अडियो दिने महिलाकै श्रीमानको भएको खुल्यो’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘प्रहरी पुग्दा टाउको र शरीर अलग-अलग भएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो।
कैलालीका डीएसपी वेदप्रकाश जोशीका अनुसार शव बरामद हुँदा रात परिसकेकाले बेलुकी घटनास्थललाई सुरक्षित गरेर राखियो। आइतबार बिहान मुचुल्का गरेर शवलाई पोष्टमार्टम गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भने,
तालिम प्राप्त कुकुरलाई घटनास्थलमा ल्याएर पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अर्जुनको धारिलो हतियार प्र’हार गरेर ह’त्या गरेपछि कपडा खोलेर रुखमा बाँधेको हुनसक्ने देखिएको जोशी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हात पनि पछाडि बाँधिदिएको देखिएको छ। ह’त्या गरेर भारत भागेको दाबी: हालै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अडियोमा आफूहरु ह’त्या गरेर रुपैडिया नाका हुँदै बैंग्लोर भागेको दाबी गरिएको छ।
प्रहरीले यही अडियोको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार अडियोमा घाँटी र शरीर अलग-अलग गरिदिएको बताउने व्यक्ति जानकी गाउँपालिका–९ कै अर्जुन भण्डारी हुन्।
उनले शनिबार बिहान अरुणका छिमेकी समेत पर्ने एक जना युवकको म्यासेन्जरमा आफूले ह’त्यापछि गरेको फोन वार्ताको अडियो पठाएका रहेछन्’ ती अधिकृतले भने। मृतककी श्रीमतीलाई हत्यापछिको अडियो पठाउने युवकलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले मृतककी श्रीमतीलाई अडियो पठाउने युवकसहित अन्य शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई निगरानीमा राखिएको बताए।
मृतक दासले लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको प्रहरीको अनुमान छ र त्यसकै कारण ह’त्या भएको हुनसक्ने भनिएको छ। मृतक सामान्य मजदूरी गर्ने गर्थे। भारतबाट उनी २० दिनअघि मात्रै कैलाली आएका थिए ।
उनका आमाबुबा पनि भारतमै थिए। घटनापछि प्रहरीले उनीहरुलाई कैलाली बोलाएको छ। केछ अडियोमा ? अडियोमा उनले भनेका छन्, ‘एक/दुई दिनमा तपाईं खबर पाइहाल्नुहुन्छ,
घाँटी अलग छ, शरीर अलग छ। त्यतिकैमा अर्का व्यक्तिले कसको ? भनेर सोधेका छन्। जवाफमा उनले ‘जसको भएनी अलग छ। यति कुरा बुझ, जसमा कहाँ पुगिसकेँ’ भनेका छन्।